YouTube loogu talagalay macruufka ayaa horeyba u bixiya HDR iPhone XS | Wararka IPhone
Liiska qalabka la jaan qaadaya HDR ee ku jira barnaamijyada kala duwan ee maaddooyinka badan leh ee la soo bandhigo ayaa si ballaadhan ugu sii kordhaya mahadnaqa wararka iyo gaar ahaan hagaajinta ka dhici doonta galka. Ma noqon karto haddii kale nooca ugu dambeeyay ee iPhone, iyo hadda YouTube horeyba wuxuu u siiyaa dadka isticmaala iPhone XS iyo iPhone XS Max awood ay ugu raaxaystaan ​​waxyaabaha ku jira HDRSi kastaba ha noqotee, wali ma bixiso qaraarro ka sarreeya kan Full HD. Tani waa sida YouTube ay u go'aansatay una tixgelineyso qaraarada halbeegga yar ee ay bixiso iPhone X, way sii socon doontaa.
Fursadaha ugu badan ee YouTube ay u oggol tahay hadda iPhone XS Max waxay si sax ah ula mid yihiin walaalahooda yaryar, taas oo ah, laga bilaabo 720p oo ah 60FPS oo leh HDR, illaa 1080p oo laga helayo 60FPS ee HDR. Tani waxay ka timid gacanta cusbooneysiinta illaa qeybta 13.37 ee rasmiga rasmiga ah ee barnaamijka YouTube ee loogu talagalay macruufka, laakiin ma awoodi doonno inaan wax intaas ka badan weydiisanno. Faahfaahin kale ayaa ah in hadda HDR uu otomaatig noqon doono marka isku xirku u oggolaado, taasi waa, uma baahnid inaan gacanta ku dooranno HDR sidii ay ahayd illaa iyo hadda, wax sidan oo kale ah ayaa dhab ahaan ah waxa uu sameeyo barnaamijka Netflix.
Sidaad ogtahay, shaashadda OLED ee iPhone XS ayaa loo caleemo saaray sida ugu fiican adduunka marka loo eego DisplayMate, oo bixisa heerar heer sare ah oo isbarbar dhiga. Si kastaba ha noqotee, xallintu waa kalabar udhaxeysa 4K iyo FullHD, taas oo ka dhigaysa kuwa horumariya sida Google inay muujiyaan xiiso yar inay ka dhigaan arjiga mid la jaan qaadaya qaraarada sare. Si kastaba ha noqotee, Runtii ma uga baahanahay YouTube-ka? Waxaan si daacad ah u maleynayaa inaysan aheyn sababtoo ah xaddiga kooban ee waxyaabaha ku jira astaamahan awoodda badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » YouTube loogu talagalay macruufka ayaa horeyba u bixiya HDR iPhone XS